Gaadiid Qaraxyo sida oo lasheegey in ay ku jiraan Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Gaadiid Qaraxyo sida oo lasheegey in ay ku jiraan Muqdisho
Gaadiid Qaraxyo sida oo lasheegey in ay ku jiraan Muqdisho
Golaha Wasiirada oo maanta Muqdisho ku yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa waxa ay diirada ku saareen arimaha amniga, iyada oo sidoo kale kulanka warbixino looga dhageystay Wasiirada qaar ee Xukuumadda.
Wasiirka Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaalle) ayaa Golaha siiyay warbixin la xiriirta xaalada amni ee dalka gaar ahaan mida magaalada Muqdisho, wuxuuna sheegay in magaaalada ay ku jiraan Gaadiid Qaraxyo sida.
C/raxman Iidan Yoonis oo ah Wasiir Ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ahna ku simaha Wasiirka Warfaafinta oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in laba gaari oo qaraxyo sida ay ku jiraan Magaalada.
Wuxuu sheegay mid ka mid ah gaadiidka qaraxyada ee Magaalada ku jira inu yahay NOAH loo ekeysiiyay kuwa ay leedahay Shirkadda Sahal oo ka hawlgasha Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho., kuwaasi oo la doonayo in lagu beegsado xarumo dowladeed.
“Wasiirka Amniga ayaa warbixin laga dhageystay, Wasiirka wuxuu sheegay in xaaladaha ay aad u fiican yihiin, laakiinse uu jiro gaari NOAH oo loo soo ekeysiiyay mid ka mid ah Gawaarida shirkadda Sahal ee ka shaqeysa Garoonka Diyaaradaha, lana rabo in laga digtoonaado.” Ayuu yiri Wasiir ku xigeenka Warfaafinta.
Sidoo kale Wasiir Iidaan ayaa shacabka kaga digay qatartaasi amni iyo inay ka feejignaadaan gaarigaasi NOAH ah iyo gaariga kale, laamaha ammaanka dowladda ayuu sheegay in lagu amray inay soo qabtaan gaadiidkaasi qaraxyada sida ee Magaalada ku jira.